Ukususela kwi Kml ukuya kwi-Geodatabase-Geofumadas
Ukususela kwi Kml ukuya kwiGeodatabase
NgoDisemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Sasivame ukuthetha ngendlela i-Arc2Earth ikuvumela ukuba uxhume i-ArcGIS kunye neGoogle Earth, layisha kwaye ulanda idatha kwimiba yomibini. Ngoku ndiyabonga Geochalboard siyazi ukuba singenisa njani idatha evela kwiifayile zekm / kmz ngqo kwi-ArcCatalog Geodatabase.
Arc2Earth kwi menu, khetha yokungenisa / yokungenisa KML-KMZ, ngoko iqela apho ungaqwalasela ukungenisa idatha livela ngayo:
Emva koko iphaneli ibonisa ithebhu "jikelele" iindlela zokukhetha ukuba ifayile ifanelana namazinga eGoRRSS.
Kwimeko yokungena kwi-Personal Geodatabase, indawo ye-database ye-mdb ikhethwe.
Ukuba ngaba unedatha ye-Enterprise ephunyezwa nge-ArcSDE, kufuneka ubhale umtya ochaza igama lovimba, umsebenzisi, iphasiwedi kunye ne-server. Ungakwazi kwakhona ukuqwalasela iimpawu zenkalo ye-Feature feature, ukuba kukho imigaqo equlunqwe ukutolika isitayela esilungiselelwe kwi-kml.
Kulo ithebhu "idatha ye-schema", ungacacisa ukuba ifayile ye-kml ineempawu zeelwimi ze-2.2 kml, apho isakhiwo se-xml sikuvumela ukuba uchaze ezinye iimpawu ezifana nezibhali zeedome, izitayela zomgca kunye nobunzima obunzima. Ezi ziyakwazi ukuchazwa njengeetemplates kwaye zingenise kuphela ezo zinto ezivela kwifayile efanisa ithemplate ... ngaloo ndlela ungachaza izihlungi malunga noko ungafuni ukungenisa.
Kulo ithebhu «ongakhethayo», Uyakwazi ukukhankanya ukuba desdeamos data ngaphandle endaweni isiqulatho ekhoyo ogama iimpawu coincident (indawo) ukuba desamos ukubuyisela zonke ezikhoyo okanye unqwenela ukuba kongezwe (isibuzi).
Napha, kwakhona, indawo ekuya kuyo ukugcinwa kwendawo eyogcinwa.
Amanye amaqhagamshelwano anomdla:
Ividiyo ibonisa indlela ukungenisa kusebenza ngayo neArc2Earth
Iikhosi ziyafumaneka kwi-Arc2Earth
Post edlulileyo«Edlulileyo Yintoni i-ESRI efuna ilayisenisi ezintsha?
Post Next Amanani akhethekileyo e-ESRI oomasipalaOkulandelayo "